MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tirada Askarta ay u dirayso dalka South Sudan, kuwaasoo qeyb ka noqonaya ciidamo ka socda dalalka gobolka Geeska Africa oo nabad ilaaliyaal ah.
Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa diyaarisay 99 Askari oo loo dirayo South Sudan, si lamid ah dalka Jabuuti oo tiro intaasi la eg u diraya dalkan ugu da'da yar caalamka ee colaadda sokeeye ka socoto tan iyo 2013-kii.
Dalalka Kenya, Sudan iyo Uganda ayaa midkiiba diraya 499 Askari, waxayna ciidamadan waajibaadkooda shaqo noqon doonaa inay ilaaliyaan shacabka iyo hogaamiye-yaasha mucaaradka South Sudan, kadib markii dhawaan heshiis nabadeed laga gaarey colaadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa balan-qaadey in Soomaaliya ciidan u dirayso South Sudan, kadib markii uu qeyb ka noqday madaxdii IGAD ee goobjooga u ahaa saxiixa heshiiska Nabadda South Sudan bishii September ee sanadkan ka dhacay Addis Ababa.
Soomaaliya ayaa waxay ku tiirsan tahay hadda ciidamada AMISOM, oo difaaca xarumaha dowladda iyo goobaha kale, iyadoo ciidamada qaranka aysan wali u diyaarsaneyn, awoodna u lahayn inay la wareegaan mas'uuliyadda amniga dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa maanta oo sabti ah lagu wadaa in xariga laga jaro Saldhigga Turkiga ee magaalada Muqdisho, kaasi oo ah midka ugu weyn ee Turkiga ku leeyahay Qaaradda Africa.
Taliyaha Guud ee Ciidamada dalka Turkiga, Jeneraal Hulusi Akar iyo wafdi ...
Villa Somalia oo ka warbixisay safarka Farmajo ee South Sudan
War Saxaafaded 01.11.2018. 00:09
Farmaajo oo u safray South Sudan xilli dalka uu khilaaf ka jiro
Soomaliya 31.10.2018. 16:21
Khasaaraha Qaraxyadii Muqdisho oo kordhay iyo Wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 10.11.2018. 11:13
Shirka Caalami ah oo ka furmaya Muqdisho iyo wadooyinka oo la xiray
Soomaliya 27.10.2018. 10:27